Near France dị n'ebe ọwụwa anyanwụ ókè na Germany, emi odude ke Strasbourg bụ Strasbourg ụgbọ okporo ígwè. Ọ bụ nke abụọ kasị ukwuu na mba ahụ, na arụmụka kasị mara mma.
The okwu Grand anaghị ọbụna na-amalite na-akọwa Antwerp Central ụgbọ okporo ígwè. Neo-baroque ịtụnanya dị ka katidral karịa ebe njem. The Train Station na-atụmatụ a saa mbara n'ọnụ ụlọ nchere mere nke marble na nkume, atụmatụ a nnukwu elekere na kpuchie a nnukwu dome.
Nke a ụgbọ okporo ígwè bụ nanị ọmarịcha na bụ na mbụ na Sao Bento de Ave-Maria Nọn na Site n'èzí, njem ga-ahụ na ụlọ nwere a mara mma ndị Paris-style nkume facade.
Ị gara ọ bụla n'ime ndị a mara mma n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè? Tweet anyị gị photos @SaveATrain Njikere ka akwụkwọ gị ọzọ njem? mgbe ahụ gaa www.saveatrain.com
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feuropes-most-beautiful-railway-stations%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#ụgbọ okporo ígwè TrainStation Train Travel Travel njegharị travelfrance njegharị